#mi4i sound booster အသံချိန်ပီး ကလိကြည့်ခြင်း « XMS-MMF
#mi4i sound booster အသံချိန်ပီး ကလိကြည့်ခြင်း
1. Open Root Explorer, go to /System/etc/copy "mixer_paths.xml" in to some other place2. Download the attached file and extract. 3. Replace the mixer_paths.xml with the extracted one (overrite it).4. Change the Permission to rw-r-r
5. Restart Your Mobile
root explorer apk>>>> https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZOlNXZUyHH7ASBA30C1arJC6O6pmACkRYy
ဒီကောင်လေးကို အရင်ဆုံး အင်စတောလုပ်ပါ
ပီးသွားရင် အပေါ်က sound file ကို အင်စတောလုပ်ပါ… zip ဖိုင်ကို extract လုပ်လိုက်ရင် အထဲမှာ mixer_paths.xml file ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်…
ခုနက အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ root explorer ကိုသွားပီး system/etc ထဲမှာ mixer_paths.xml တွေ့မယ် အဲဒါလေးကို ထောက်ပီး backup လုပ်ပါ.. ပီးရင် ခုနက zip file ထဲကနေ တွေ့တဲ့ mixer_paths.xml ကို အဲဒီ့ထဲမှာ paste လုပ်ပေးရပါမယ်.. ပီးရင် အဲဒီ့ဖိုင်လေးကိုထောက်လိုက်ပါ… box တခုကျလာမယ် အဲဒီ့ထဲက permission ကိုရွေးပီး rw-rw-rw ဖြစ်နေတာကို rw-r-r ပြောင်းပီး reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ… ပြန်တက်လာရင် လူကြီးမင်းဖုန်းရဲ့အသံဟာ သိသိသာသာကို ကျယ်လာပါလိမ့်မယ်...
ဒီနည်းက ခက်တယ်လို့များ ယူဆထားရင်တော့ အောက်ကနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
twrp recovery ကနေ အခုအောက်ကပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို အင်စတောလုပ်ပေးရပါမယ်.. reboot ပြန်တက်လာရင် homepage မှာ doby audio မြင်ရပီဆိုရင်တော့ အဲဒီ့ထဲကနေ လူကြီးမင်းစိတ်ကြိုက် အသံချိန်ညှိလို့ရပါတယ်….
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားတာ နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေပီး သုံးလို့ကောင်းပါတယ်..
ပြောနေကြစကား ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ဒန်တန့်တန်ပါ… (as your own risk)